तपाईको शरीरमा भएको कुन भागको कोठीले कस्तो संकेत गर्दछ?हेर्नुहोस पुरा जानकारी « गोर्खाली खबर डटकम
१. आँखी भौंको कोठी= यदि दुबै आँखी भौंमा कोठी छ भने त्यस्ता व्यक्तिले यात्रा गरिरहने स्वभाव हुने गर्दछन् । यदि आँखी भौंको बीचमा छ भने त्यस्ता व्यक्ति नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमताका हुने मान्यता छ ।२. नाकको कोठी= यदि नाकमा कोठी छ भने यी व्यक्ति छिट्टै सोच्ने र छिट्टै रिसाउने स्वभावका मानिन्छन् । नाकको दायाँतर्फ कोठी छ भने धेरै पैसा कमाउने संकेत मानिन्छ ।
३. ओठको कोठी= ओठमा माथिल्लो भागमा कोठी हुने व्यक्ति निकै प्रेमिल स्वभावका हुन्छन् । त्यस्तै ओठको तल्लो भागमा कोठी हुने व्यक्तिले मिठो खानेकुरा मनपराउँछन् ।४. कानको कोठी= कानको कुनै पनि भागमा कोठी भएका व्यक्तिले राम्रो कमाउने र उनीहरुको जीवनशैली भव्य हुन्छ संकेत गर्दछ । तर यी अंगमा कोठी हुनेहरुमा बचत गर्ने बानी हुँदैन ।
५. टाउकोमा कोठी= टाउकोमा रहेको कोठी कपाल खौरिए पछि मात्र देखिन्छ । यदि टाउको दायाँ भागमा कोठी छ भने यी व्यक्ति राजनीतिमा सफल हुने संकेत मानिन्छ । यदि कोठी रातो छ भने त्यस्ता व्यक्ति नेता हुने मान्यता छ ।६. निधारको कोठी= कुनै ब्यक्तिको निधारको मध्य भागमा कोठी छ भने यो निर्मल प्रेमको निशानी हो । निधारको दाहिनेतर्फको कोठीले बिषयगत निपूर्णता दर्साउँछ भने बायाँतर्फको कोठी फजुल खर्चको प्रतिक मानिन्छ ।
७. गालाको कोठी= गालामा रातो कोठी हुने ब्यक्तिलाई शुभ फल प्राप्त हुने मान्यता छ । गालाको दायाँ भागमा कोठी हुने व्यक्ति निकै संवेदनशील हुने गर्दछन् । बायाँ गालामा कोठी भएकाहरु अन्र्तमुखी स्वभावका र रिसालु हुने दर्साउँछ ।८. घाँटीको कोठी= घाँटीको पछाडि कोठी हुने मानिसहरु रिसालु प्रवृत्तिका हुन्छन् । घाँटीको अग्र भागमा कोठी भएकाहरु राम्रो स्वर भएको कलात्मक व्यक्तित्वको परिचय दिन्छ ।
९. काँधमा कोठी= काँधको दायाँतर्फ कोठी भएका मानिसहरु बलवान् र साहसी हुन्छन् भने बायाँ काँधमा कोठी हुनेहरु अरुसँग झगडा गर्न अग्रसर हुन्छन् ।१०. आँखामा कोठी= दायाँ आँखामा भएको कोठीले जीवनसाथीसँग राम्रो सम्बन्ध हुने बताउँछ भने दाहिने आँखाको कोठीले सजिलै पैसा कमाउन सक्ने संकेत गर्दछ ।